Tag: cx | Martech Zone
Tijaabinta Isticmaalka: Baahida Aragtida Aadanaha ee lagu hagaajinayo Khibradda Macaamilka
Suuqgeynta casriga ahi waxay ku saabsan tahay macaamilka. Si loogu guuleysto suuqa macaamiisha udub dhexaad u ah, shirkadaha waa inay diiradda saaraan khibrada; waa inay u damqadaan oo dhagaystaan ​​jawaab celinta macmiilka si ay had iyo jeer u horumariyaan khibradaha ay abuurayaan oo ay keenayaan. Shirkadaha soo dhaweynaya aragtida aadanaha oo ay ka helaan jawaab celin tayo leh macaamiishooda (oo aan kaliya aheyn xogta sahanka) waxay awoodaan inay si wanaagsan ula xiriiraan oo ay ula xiriiraan iibsadayaashooda iyo macaamiishooda siyaabo macno leh. Ururinta aadanaha
Daraasadda InMoment waxay daaha ka rogaysaa 6 fure oo lama filaan ah oo shaqsiyeed
Arbacada, Janaayo 25, 2017 Arbacada, Janaayo 25, 2017 Douglas Karr
Suuqyayaashu waxay ku darsadaan waaya-aragnimo shaqsiyeed xayeysiis si fiican loo bartilmaameedsaday halka macaamiisha ay la xiriirinayaan khibradooda macaamiisha (CX) ee taageerada iyo iibsashada. Xaqiiqdii, 45% macaamiisha ayaa mudnaanta siiya helitaanka khibrad shaqsiyadeed oo loogu talagalay isdhexgalka taageerada kuwa la macaamilaya suuqgeynta ama nidaamka shaqsiyeed ee iibsiga. Farqiga ayaa loo aqoonsaday oo si buuxda loogu diiwaangeliyey daraasad caalami ah oo cusub oo ka socota InMoment, Awoodda Dareenka iyo Shakhsiyadeed: Sida Calaamaduhu u fahmi karaan una la kulmi karaan rajooyinka macaamiisha. Waddan kasta oo la daraaseeyo, sumado iyo
CX iyo UX: Farqiga u Dhexeeya Macaamiisha iyo Isticmaalaha
Isniin, Maarso 7, 2016 Isniin, Janaayo 23, 2017 Suzi Shapiro
CX / UX - Kaliya hal xaraf ayaa ka duwan? Hagaag, in kabadan hal xaraf, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo iskaga mid ah oo udhaxeeya Khibrada Macaamiisha iyo Shaqada Khibrada Isticmaalaha. Xirfadlayaal labada diirada saara waxay u shaqeeyaan inay wax ka bartaan dadka iyagoo sameynaya cilmi baaris! Isku ekaanshaha Khibradda Macaamiisha iyo Ujeedooyinka Macaamilka iyo Macaamiisha iyo ujeedooyinka iyo habka inta badan waa isku mid. Labaduba waxay leeyihiin: Dareen ah in ganacsigu uusan ahayn oo kaliya iibinta iyo wax iibsiga, laakiin ku saabsan qancinta baahiyaha iyo bixinta qiimaha
Maanta, suuqleyda raadinaya sida ugu dhaqsaha badan uguna xariifsan ee lagu maareeyo khibrada macaamiishooda waxay madaxooda u jeedinayaan daruurta. Tani waxay u oggolaaneysaa dhammaan macluumaadka macaamiisha inay ku qulqulaan kana baxaan nidaamyada suuq-geynta si habsami leh. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay in astaamaha macaamiisha si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyo macluumaadka macaamiisha si otomaatig ah loo abuuro waqtiga-dhabta ah, oo bixiya aragti dhammaystiran oo isku dhafan oo ku saabsan isdhexgalka macaamiisha ee guud ahaan shirkadda calaamadaha. SDL, hal abuureyaasha Macaamiisha Khibrada Macaamiisha (CXC),
UserZoom: Isticmaalka Qiimaha-Wax ku oolka ah iyo Cilmi baarista Macaamiisha
Talaado, Janaayo 21, 2014 Talaado, Janaayo 21, 2014 Douglas Karr
UserZoom waxay siisaa daruur ku saleysan, dhammaan barnaamijyada cilmi-baarista isticmaale ee khadka tooska ah ee shirkadaha loogu talagalay shirkadaha qiime-si wax ku ool ah u tijaabiya adeegsiga, cabbiraadda codka macaamilka iyo gaarsiinta khibradaha macaamiisha ee waaweyn. UserZoom waxay siisaa awood cilmi baaris ah desktop-ka, oo ay kujirto baaritaanka isticmaalka fog, kala soocida kaarka, baaritaanka geedaha, shaashadda riixista shaashada, shaashadda waqtiga kamaqan ee shaashada, sahanada internetka, VOC (Fahamka Dhex-dhexaadinta), VOC (Jawaab celinta) iyo sidoo kale tijaabada isticmaalka mobilada iyo barnaamijka moobiilka VOIC (Dhex-dhexaad). Natiijooyinka cilmi-baarista ee ku saabsan xogta isticmaalka, jawaabaha sahanka,